Mkpughe E Kpugheere Jọn 19:1-21
19 Mgbe ihe a gachara, anụrụ m oké olu dị ka nke oké ìgwè mmadụ n’eluigwe. Ha sịrị: “Toonụ Jaa!*+ Ọ bụ Chineke anyị na-azọpụta mmadụ. Ọ dị ebube, dịkwa ike. 2 Ikpe ya ziri ezi, e kwesịkwara ịtụkwasị ikpe ya obi.+ N’ihi na ọ taala nwaanyị akwụna ahụ ahụhụ. Nwaanyị a ji iko ọ na-akwa* merụọ ụwa, Chineke abọọkwala ọbọ ọbara ndị ohu ya n’isi ya.”+ 3 Ozugbo ahụ, ha kwuru nke ugboro abụọ, sị: “Toonụ Jaa!*+ Anwụrụ ọkụ nke si n’ahụ́ ya ga na-akwụgo ruo mgbe niile ebighị ebi.”+ 4 Ndị okenye iri abụọ na anọ ahụ+ na ndị mmụọ ozi anọ ahụ*+ gburu ikpere n’ala ma kpọọrọ Chineke bụ́ onye nọ ọdụ n’ocheeze isiala, sị: “Amen! Toonụ Jaa!”*+ 5 Otu olu sikwa n’ocheeze ahụ sị: “Na-etonụ Chineke anyị, unu niile bụ́ ndị ohu ya,+ ndị na-atụ egwu ya, ndị ukwu na ndị nta.”+ 6 Anụkwara m ihe na-ada ka olu oké ìgwè mmadụ, dịkwa ka ụda nke mmiri na-asọ ike ike na ụda oké égbè eluigwe. Ha sịrị: “Toonụ Jaa,*+ n’ihi na Jehova* Chineke anyị, Onye Pụrụ Ime Ihe Niile,+ amalitela ịchị!+ 7 Ka anyị ṅụrịa ọṅụ, nwee ezigbo obi ụtọ ma too Chineke, n’ihi na oge Nwa Atụrụ ahụ ga-eji alụ nwaanyị eruola, nwunye ya ejikerekwala. 8 E nyere nwunye Nwa Atụrụ ahụ ákwà linin ọma nke na-enwu gbaa, nke dịkwa ọcha. Ezigbo ákwà linin a nọchiri anya ezi omume ndị nsọ na-eme.”+ 9 Mmụọ ozi ahụ wee sị m, “Dee ihe a: Ndị a kpọrọ òkù ka ha bịa rie nri agbamakwụkwọ Nwa Atụrụ ahụ+ na-enwe obi ụtọ.” Ọ sịkwara m: “Ọ bụ Chineke kwuru ihe ndị a e kwesịrị ịtụkwasị obi.” 10 M wee sekpuru ala n’ụkwụ ya ka m fee ya. Ma ọ sịrị m: “Kpachara anya! Emela ya!+ Abụ m naanị ohu otú gị na ụmụnna gị bụkwa, unu ndị e nyere ọrụ ịna-agba àmà banyere Jizọs.+ Na-efe naanị Chineke,+ n’ihi na amụma ndị a na-ebu bụ maka ịgba àmà banyere Jizọs.”+ 11 Ahụrụ m ka e meghere eluigwe, hụkwa otu ịnyịnya ọcha+ dị ebe ahụ. A na-akpọkwa onye na-agba ya Onye E Kwesịrị Ịtụkwasị Obi+ na Onye Eziokwu.+ Ọ na-ekpe ikpe ziri ezi, na-alụkwa agha kwesịrị ekwesị.+ 12 Anya ya bụ ire ọkụ na-enwu enwu,+ o kpukwa ọtụtụ okpueze n’isi ya. O nwekwara aha e dere n’ahụ́ ya, nke onye ọ bụla na-amaghị ma e wezụga yanwa. 13 O yikwa uwe elu ọbara gbasara.* Aha a na-akpọkwa ya bụ Okwu+ Chineke. 14 Ụsụụ ndị agha nọ n’eluigwe gbakwa ịnyịnya ọcha na-eso ya n’azụ. Ha yikwa ezigbo ákwà linin nke na-acha ọcha, dịkwa ọcha. 15 Ogologo mma agha dị nkọ sikwa n’ọnụ ya pụta.+ Ọ ga-eji ya gbuo mba niile. Ọ ga-ejikwa mkpanaka ígwè taa ha ahụhụ.*+ Ọ na-azọchakwa mkpụrụ dị n’ebe a na-azọchapụta mmanya nke nọchiri anya iwe dị ọkụ nke Chineke, Onye Pụrụ Ime Ihe Niile.+ 16 O nwere aha e dere n’uwe elu ya, n’ebe apata ụkwụ ya. Aha ahụ bụ Eze ndị eze na Onyenwenụ kacha ndị nwenụ niile.+ 17 Ahụkwara m otu mmụọ ozi ka o guzo n’anyanwụ. O jikwa oké olu kpọọ nnụnụ niile na-efe n’etiti eluigwe,* sị: “Bịanụ ebe a. Zukọtanụ maka nnukwu oriri Chineke kpọrọ,+ 18 ka unu wee rie anụ ndị eze na anụ ndị ọchịagha na anụ ndị dị ike+ na anụ ịnyịnya na nke ndị na-agba ha,+ na anụ mmadụ niile, ma nke ndị nweere onwe ha ma nke ndị ohu, ma nke ndị nta ma nke ndị ukwu.” 19 Ahụkwara m anụ ọhịa ahụ na ndị eze ụwa na ụsụụ ndị agha ha ka ha zukọtara ka ha lụso ma onye ahụ na-agba ịnyịnya ahụ ma ụsụụ ndị agha ya agha.+ 20 E jidekwara anụ ọhịa ahụ na onye amụma ụgha ahụ+ nọ n’ihu ya mee ihe ndị dị ịtụnanya, ndị o ji duhie ndị a kara akara anụ ọhịa ahụ+ na ndị na-efe ihe yiri ya a kpụrụ akpụ.+ A tụbara anụ ọhịa ahụ na onye amụma ụgha ahụ ná ndụ n’ọdọ ọkụ* nke sọlfọ mere ka ọ na-enwusi ike.+ 21 Ma, e ji ogologo mma agha ahụ si n’ọnụ onye ahụ na-agba ịnyịnya+ pụta gbuchapụ ndị fọrọnụ. Nnụnụ niile rikwara anụ ha, rijuo afọ.+
^ O nwere ike ịbụ, “e fesara ọbara.”
^ Ma ọ bụ “Ọ ga-ejikwa mkpanaka ígwè chịa ha.”
^ Ma ọ bụ “na-efe n’elu.”
^ Ọ pụtara mbibi ebighị ebi. Gụọ Nkọwa Okwu.